Izindlela ezi-10 ezinhle kakhulu ze-iTunes Ongazizama ngo-2020 - Ama-Softwares
I-iTunes nakanjani kufanele ibe nesoftware yokufinyelela kumculo, ama-TV, ama-movie, njll. Noma ngabe ufuna ukulanda noma ulalele umculo, yenza isipele se-iPhone yakho, noma uphathe idivayisi yakho ye-IOS, ungakwenza ngokumane usebenzise i-iTunes. Kodwa-ke, abasebenzisi abaningi be-IOS baqale ukufuna enye i-iTunes njengoba i-Apple isiqalile ukukhipha i-iTunes.
Ngokuvuselelwa okusha sha kwakamuva kakhulu kwe-MacOS Catalina, i-iTunes ihlukaniswe yaba yizinhlelo zokusebenza ezintathu ezihlukene (ama-Podcast, i-Apple Music, ne-Apple Tv), uhlelo lokusebenza ngalunye lusetshenziselwe ukusetshenziswa okuthile. Lezi zinhlelo zokusebenza ziphatha konke ukuphathwa kwedatha okwakuphathwe yi-iTunes.
Ama-akhawunti wamahhala weNetflix - Izindlela ezihamba phambili zokukhiqiza
Kungani abasebenzisi be-iOS befuna i-software ehlukile ye-iTunes?
Kunezizathu eziningi. Sibhale amaphuzu athile ngezansi.
Ukufeza eminye imisebenzi engenakufinyelelwa ngqo ngedivayisi ye-IOS kuphela.
Ukuthola ukufinyelela okuqondile kudatha yabo.
Ukususa izingqinamba ngezipele ze-iOS noma ze-iOS.
Uhlu Lwama-iTunes Best Alternatives:
1. UWALTR 2
I-Waltr 2 iyatholakala nge-Mac ne-Windows ngesivivinyo samahhala. Udinga ukuyithenga ukuze usebenzise inguqulo ephelele, yize ingashibhile. Kepha, isoftware ingenye yezindlela ezingcono kakhulu ze-iTunes. Ungaxhuma ifoni yakho usebenzisa ikhebuli noma nge-WiFi futhi. Ingadlulisa izithombe nomculo ngemizuzwana (ngendlela nje ongadlulisa ngayo nge-AirDrop.) Ixhasa lonke uhlobo lwamafayela. Ngakho-ke, iWALTR 2 Ifanele yonke imali oyinikezayo.
2. IMacX MediaTrans
IMacX MediaTrans kungenye indlela eya ku-iTunes, engasetshenziswa ukudlulisa nokwenza isipele idatha phakathi kwamadivayisi we-iOS. Kungaba wusizo ngokudlulisa umculo, amavidiyo, nama-movie kusuka ku-Mac noma kunoma yimaphi amadivayisi we-IOS. Uma i-iTunes ingenakho konke okudingayo, lena ingaba wusizo kuwe. Ungakha futhi ukuncenceza ngale software. Futhi, ungagcina imidiya yakho ivikelekile ngokubethela.
I-MusicBee futhi ingaba isidlali somculo esimangalisayo nomphathi womculo. Inezici eziningi ezithuthukile nezilungiselelo zokuphatha nokudlala amafayela omculo.
Itimu ye-MusicBee iyashintsha. Ngakho-ke, ungayishintsha njengokuthanda kwakho nalokho okufisayo.
Ungathuthukisa ikhwalithi yomculo.
Ungangenisa kalula wonke amafayela omculo asuka ku-iTunes aye kwi-MusicBee ngemizuzu embalwa nje.
Inesilinganisi se-15-band ukulungisa ikhwalithi yomsindo.
4. Umphathi we-DearMob iPhone
I-DearMob iPhone Manager konke kusoftware eyodwa. Ungasebenzisa le software ngakho konke kusuka ekudluliseni amafayela omculo, amavidiyo, ukudala isipele sedivayisi yakho, noma yini nje. Ukubukeka kwesoftware futhi kulula futhi kulula ukuyisebenzisa okusiza abasebenzisi ukuthi basebenzise isoftware ngaphandle kwenkinga.
Izici ze-DearMob iPhone Manager:
Iqukethe insizakalo yokuphathwa komsindo ecebile.
Inamathuluzi amaningi wokucindezela ngaphakathi kwesoftware.
Ungayisebenzisa ukwenza isipele noma ubuyisele idivayisi yakho ngokuchofoza okumbalwa.
Isiza abasebenzisi ukungenisa nokuthumela kalula amafayela anezici zokuphepha.
Uma ufuna enye i-iTunes elula enezici ezifanayo nokulungiselela, i-Anytrans yisoftware yakho.
Ama-anytrans akhokhelwa. Ungasebenzisa inguqulo yamahhala ukudlulisa kuphela umculo kusuka ku-iPod yakho kuya kwi-Mac / PC.
Ungapheqa, uhlele, udlulise amafayela nge-Anytrans.
Ine-interface elula kakhulu.
IMediaMonkey ingenye yezindlela ezingcono kakhulu ze-iTunes ezinamathuluzi athuthukile. Inawo wonke amathuluzi wokuphathwa kwemidiya adingekayo ukuthi ungafinyelela kuwo usebenzisa i-iTunes.
Kuyasiza ukususa amafayela ayimpinda.
Kuyasiza ukuvumelanisa imidiya ku-iOS nakwamanye amadivayisi kalula.
Ixhasa amafomethi amaningi alalelwayo, kufaka phakathi i-MP3, M4A, WMA, FLAC, nokunye okuningi.
Ungakha futhi wenze ngezifiso uhlu lwakho lwadlalwayo lomsindo nevidiyo.
Inezinguqulo ezikhokhelwe nezamahhala.
Njengoba igama lihamba, i-SynciOS isetshenziselwa ukuvumelanisa amafayela nedatha kumadivayisi we-iOS. Le software inamathuluzi wokuphatha amangalisayo nezilungiselelo, okwenza kuphelele ukusetshenziswa njengenye indlela ye-iTunes.
Isekela ukudluliswa kwemidiya zombili izindlela.
Inika amandla umsebenzisi ukuthi enze isipele wonke amafayela efoni futhi avumelanise amafayela afana ne-eBooks, umculo, ividiyo, izithombe, ukuncenceza nokunye okuningi ku-iOS noma kwamanye amadivayisi.
Ikhululekile ngokuphelele ukufinyelela kuzo zonke izici zayo.
I-SynciOS ivumela umsebenzisi ukuthi asebenzise amathuluzi nezinye izinketho ngendlela elula. Izoshintsha nendlela yakho yokuphathwa komculo ngendlela entsha.
Nayi enye isoftware eza nenqwaba yezici ongayisebenzisa njengenye ye-iTunes.
Ilusizo kakhulu ekuphathweni kwemidiya nezinguqulo zayo ezihambisana kakhulu.
Ungavumelanisa uhlu lwakho lokudlalwayo lomculo kusuka ku-iTunes kuye ngokushesha okukhulu futhi kalula.
Ivumela umsebenzisi ukufinyelela kumculo ngezinsizakalo zefu ezifana neDropbox, i-OneDrive, ne-Google Drayivu.
UDkt Fone Transfer kungenye i-iTunes ehlukile engasetshenziswa ukudlulisa imidiya nenye idatha kusuka kumadivayisi we-iOS ne-Mac kwi-PC ngaphandle kwe-iTunes.
Izici zokudluliswa kwe-dr.
Ivumela isipele somsebenzisi yonke idatha kusuka kudivayisi ye-iOS iye kwi-PC bese iyithumela kwenye idivayisi ye-Apple ukusetha i-iPhone entsha noma i-iPad noma iyiphi idivayisi ye-IOS.
Akudingi i-iTunes nganoma yikuphi ukudluliswa kwedatha.
Kuyinto software ehambisanayo kakhulu.
UFidelia ungumphathi womculo kanye nenye indlela emangalisayo ye-iTunes. Ingasetshenziselwa ukulungisa nokwenza ngezifiso amafomethi ahlukahlukene womsindo nevidiyo.
Isekela ifomethi yomsindo ye-FLAC.
Inobuchwepheshe beZotope bokuguqulwa okulula nekhwalithi.
Ine-interface elula yezinhlobo ezahlukahlukene zokwenza ngokwezifiso amafomethi wemidiya.
Ifakwe kahle ngekhono lehedfoni elinikeza okuhlangenwe nakho okumangazayo kumsebenzisi.
I-iTunes kwesinye isikhathi ingaqhamuka nezibuyekezo zayo ezintsha lapho kufanele uvakashele isitolo se-iTunes okungacasula kwesinye isikhathi. Futhi, sonke sinezidingo ezahlukahlukene ezingqondweni zethu zomphathi wezindaba ophelele.
Isoftware ehlukile ye-iTunes engiyibalile ngenhla ingasiza kakhulu futhi ingasetshenziswa esikhundleni se-iTunes. Noma ufuna ukudlulisa umculo, izithombe, amavidiyo, noma amanye amafayela kusuka kudivayisi yakho ye-IOS kuya kwi-PC / Mac yakho, ungasebenzisa noma iyiphi isoftware efakwe kuhlu. Ungayilanda ukuze uyizame futhi uyisebenzise ngokuzayo uma ucabanga ukuthi ifanelekile futhi ihlangabezana nazo zonke izidingo zakho.
ungathola i-netflix mahhala
idlalwa kanjani i-hotstar e-usa
bukela ubuthi ku-inthanethi mahhala ama-movie ayi-123
lapho ongabuka khona ama-movie wamahhala
bukela ukukhethwa ku-inthanethi mahhala
Amakhodi wamakhadi wesipho we-psn mahhala